Imithi Yemfuyo – The Ulwazi Programme
Isizwe samaZulu sikholelwa kakhulu emfuyweni, uma ungumnumzane ongafuyile awuhlonipheki kangako emphakathini. Ukufuya lokhu ngokunye kwezinto ezitshengisa amandla omnumzane noma usokhaya ekhaya. Ukufuya lokhu kusho lukhulu kumaZulu, njengoba imfuyo isetshenziselwa izinto eziningi, ngengokuhlaba uma kunomcimbi, ukulobola, kanye nokuhlawula, uma sibala izinto ezimbalwa.
Nayo ke imfuyo kunemithi ethile esetshenziswayo, isetshenziselwa yona ukulapha egulayo, ukuyandisa imfuyo nokuthi ingaduki. Lana ke sizobala imithi embalwa esetshenziswa ukwelapha imfuyo.
Isinwazi – Lomuthi uwusizo olukhulu uma indlezane ixakelwe, uyagxotshwa uxutshwe namanzi bese uphuziswa indlezane.
Uklenye – Lomuthi uphuziswa indlezane ukuze yehlise kakhulu.
Icena – Amacembe noma amaqabunga ecena asiza kakhulu ekwelapheni imfuyo okubalwa izimbuzi, izinkomo kanye namazinyane namankonyane uma kungenwe umkhuhlane.
Umqoqongo – Umqoqongo umuthi wamankonyane, kugxotshwa amacembe awo kuphuziswe inkonyane namazinyane anomkhuhlane.
Umathunga – Umathunga ngumuthi owumhlabelo osetshenziswa uma kuphuke inkomo noma imbuzi.
Ubuvimbo – Lomuthi usiza ekwenzeliseleni inkonyane noma izinyane lenye inkomo noma imbuzi uma ifelwe unina ukuthi ikwazi ukuncela.
Uncamu – Uncamu umuthi okhumiswa izimbuzi, lomuthi ubuye uxutshwe namanzi uphuziswe izimbuzi uma zinomkhuhlane.
1 thought on “Imithi Yemfuyo”
Kwakuhle ukuchazelwa ngingomuny ofuyile onenkomo ehudayo futh esidla kancane